Ahoana ny fitsidihana an'i Petra, ny haren'i Jordan | Vaovao momba ny dia
Ahoana ny fomba hitsidihana an'i Petra, harena any Jordania
Mariela Carril | | mpitarika, Jordania
Tsy isalasalana fa ny tontolon'ny Petra fantatrao ve izy? Io ilay karatra paositra jordan fa nipoitra koa tamin'ny sarimihetsika Hollywood maro. Toy ny varavarana ho an'ny lasa izy io, amin'ny mistery, an'ny taloha. Ny tena marina dia tsy afaka mikasa ny hanao dia mankany Jordania ianao raha tsy mitsangantsangana mankany amin'ity toerana mahafinaritra ity izay manana voninahitra Lova manerantany nanomboka ny taona 1985.
Amin'ny alàlan'ny fandehanana any ihany no ahafahan'ny olona manamarina fa ity anaram-boninahitra ity dia mendrika isaky ny vovoka, vatolampy, tsanganana, tempoly ary zavakanto sisa tavela eo imasontsika na eo aza ny fandehan'ny fotoana, ka eto no tsara indrindra fampahalalana azo tsidihina hitsidihana an'i Petra.
2 Ahoana no hitsidihana an'i Petra
3 Valan-javaboahary Petra Archaeological
Ity tanàna ity io no renivohitry ny fanjakana Nabataeanina an'arivony taona maro lasa izay, fanjakana izay dia tafiditra tao amin'ny Fanjakana Romanina izay nikarakara ny fampiroboroboana ny tanàna mandra-panovana azy ho foibe ara-barotra manan-danja. Na dia niharan'ny horohoron-tany nahatsiravina aza dia naharitra tamin'ny fotoany ary tamin'ny vanim-potoanan'ny Saladin ihany, tamin'ny faran'ny taona 1100 dia navela teo an-tanan'ny efitra izy ary lasa tsy hadino.
Toy ny ankamaroan'ny haren'ny tontolo taloha niverina tamin'ny hazavana tamin'ny taonjato faha-XNUMX avy amin'ny tanan'ny mpikaroka eropeana, amin'ity tranga ity dia avy amin'ny tanan'ny Swiss antsoina hoe Burckhardt. Ny fanadihadihana nataony no nahasarika mpikaroka hafa izay namorona sary tena tsara izay tsy maintsy raiki-pitia tamin'ny arkeology amateur mihoatra ny iray. Na izany aza, tamin'ny taona 20 no nitrandrahana ny fikarohana voalohany.
Androany Petra no iray amin'ny harena sarobidy indrindra amin'ny fanjakan'i Jordania ary ankoatry ny maha-vakoka manerantany izy io koa dia iray amin'ireo Fahagagana Vaovao Fito eto amin'izao tontolo izao.
Ahoana no hitsidihana an'i Petra
Misy safidy maromaro, miankina amin'ny inona ny teboka fanombohanao izany. Raha any amman ianao, renivohitr'i Jordania, be ny bisy miainga manomboka amin'ny 6:30 maraina ary tonga eo amin'ny toerana rava manodidina ny 10:30 maraina. Avy amin'ilay orinasa izy ireo JET Bus. Ny dia miverina dia manomboka amin'ny 5 hariva ary ny tapakila dia mitentina JD 10 isaky ny tongotra. Ny fiaramanidina dia vita amin'ny fiara maoderina, 200 ny totaliny, ary manao dia maro hafa manerana ny firenena izy.
Azonao atao koa ny mampiasa ny minibus ampahibemaso mankany Wadi Musa miala amin'ny gara Mujamaa Janobi. Ny fitsangatsanganana dia manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4 hariva, raha ny mifanohitra amin'izay dia manomboka amin'ny 6 maraina izy ireo ary amin'ny 1 ora tolakandro ny serivisy farany. Safidy mora vidy kokoa io Eny, tapany ny vidiny. ¿Azonao atao mandray taxi? Eny, na avy any Amman na avy amin'ny seranam-piaramanidina Queen Alia ary ny vidiny dia 90 JD raha mandeha fiara ianao ary 130 raha mandalo ianao dia, ho an'ny fiara iray manontolo tsy an'ny olona iray.
Ny minibus ampahibemaso dia mampifandray an'i Aqaba amin'i Wadi Musa manao fitsidihana eo amin'ny tobin'ny polisy amin'ireo tanàna roa ireo. Misy serivisy dimy isan'andro ary tsy mandeha amin'ny zoma. Ny voalohany dia miala amin'ny 6 ora maraina ary miala rehefa feno. Adiny iray sy sasany, ary adiny roa ny dias ary mila manisa tapakila eo anelanelan'ny 5 sy 6 JD ianao. Farany afaka mandray taxi ihany koa ianao, taxi fotsy miala ao amin'ny paositry ny polisy. Manodidina ny 35 JD izy ireo saingy mety hahatratra olona efatra izany. Misy koa ny taxi maitso, ireo dia mitondra anao hatrany amin'ny sisin-tany miaraka amin'i Israel, sahabo ho 90 JD.
Avy amin'ny tanàna toa an'i Wadi Rum na Madaba dia afaka mankany Petra ihany koa ianao. Amin'ny bus manomboka amin'ny 6 maraina. Raiso ny mpandeha ao amin'ny Ivotoerana Mpitsidika Wadi Rum, mijanona ao amin'ny tanàna Rum ary tonga ao Petra tokony ho tamin'ny 8 ora sy sasany maraina. Manodidina ny 30 na 5 JD ny vidiny. Eo koa ireo taxi. Ary toy izany koa raha te hiditra ao Madaba ianao.
Tena tsara tarehy ity dia ity satria ny bisy fizahan-tany dia mandeha amin'ny làlambe King, tsara tarehy tokoa, hany ka misy fijanonana sary aza ao Wadi Mujib ary iray hafa ao amin'ny Castle Castle Karak adiny iray alohan'ny hahatongavany any Wadi Musa amin'ny 3 ora 4 hariva . Mazava ho azy, io serivisy io dia tsy azo ampiasaina raha mijanona ao amin'ny Hotel Mariam ianao, na dia misy hotely hafa manolotra serivisy mitovy amin'izany aza. Jereo.
ihany koa misy fitsangatsanganana mankany Petra avy any atsinanan'i Isiraely. Misy paositra telo eo anelanelan'ny Isiraely sy Jordania: ny Allenby Bridge, Eilat, ary Beit Shean. Ny teo aloha dia mampifandray an'i Jerosalema amin'i Amman fa tsy maintsy manana visa Jordanie voahodina mialoha ianao. Tsy sarotra ny miampita fa mila fotoana maharitra ka miankina amin'ny fotoana anananao daholo. Mety te-hamandrika fitsangatsanganana lafo vidy kokoa aza ianao nefa misy menaka tsara.
Valan-javaboahary Petra Archaeological
Izy io dia tranokala lehibe dia lehibe ary azonao zahana amin'ny moramora izany, na dia manolotra ny tenany ho mpitari-dalana aza ny olona eo an-toerana. Na izany aza, misy ireo manolo-kevitra hatramin'ny efatra na dimy andro hanaovana fanadihadiana feno. Raha tsy mientanentanana amin'izany aho dia miteny fa ampy ny roa na telo. Andro iray monja dia hamela anao ho reraka sy amin'ny fahatsapana fa tsy nanao na inona na inona ianao. Amin'ny roa andro feno dia ampy.
Wadi Musa no tanàna maoderina eo amin'ny sisin'ny zaridaina, ankehitriny misy mponina manodidina ny 30. Feno maso ivoho fizahan-tany, raha te hisoratra anarana hitsidika ianao ary trano fandraisam-bahiny sy trano hafa. Tanàna azo antoka izy miaraka amin'ny olona sariaka ary afaka mijanona eto ianao na manakaiky ny valan-javaboary raha tianao. Raha izany dia afaka mandeha mankamin'ny sisa rava ianao, raha tsy izany dia afaka mandray taxi foana ianao. Eo akaikin'ny zaridaina dia misy toeram-piantsonana ary koa ny fijanonan'ny bus mankany Amman na Aqaba.
Tsy mora ny tapakila fa ianao kosa manonitra ny fotoana atokanao bebe kokoa amin'ilay fitsidihana. Ny tapakila iray andro ho an'ireo izay mandany iray alina farafahakeliny any Jordania dia mitentina 50 JD, ny roa andro 55 ary ny 60 andro 90 JD Raha mitsidika an'i Petra ianao raha vao miampita ny sisin-tany dia 40, 50 ary 40 JD tsirairay avy. Raha mijanona mandritra ny alina ihany ianao ary miverina amin'ny rava amin'ny andro faharoa, dia hahazo famerenam-bola XNUMX JD.
Raha tsy mijanona amin'ny alina ianao dia 90 JD ny fidirana. Rehefa mividy tapakila mila manolotra pasipaoro ianao. Vidina ao amin'ny Visitor Center izy io alohan'ny na rehefa mitsidika ianao dia afaka mandoa carte de crédit na carte de crédit. Nanolotra izy ireo fitsangatsanganana fitsangatsanganana telo:
Camino Principal, mandeha 4 kilometatra ary 50 JD ny vidiny.
Main Road + Tsangambaton'ny Sorona, mihazakazaka 6 km
Làlana lehibe + Monasitera, mihazakazaka 8 km.
Azonao atao ny mijery ireo fitsidihana ireo ao amin'ny tranonkala ofisialy ary ny sasany hafa havoaka amin'ity volana novambra ity. Misy ihany koa ny fitsangatsanganana fiara: misy roa, ny iray mampifandray ny Ivotoeran'ny mpitsidika sy ny Trésor (mandehandeha), 4 km), 20 JD; ary ny iray hafa mampifandray ny Ivotoerana amin'ny Tranombakoka (fitsangatsanganana, 8 km), mandritra ny 40 JD. Fiara ho an'ny olona roa izy ireo.
Ny fitsidihana an'i Petra amin'ny ankapobeny dia tsy azo avela: Bab Al Siq, ny tohodrano, ny Siq, ilay antsoina hoe Treasury na Al Khazna (ny paositra malaza eto an-tanàna), ny lafiny hafa hita teny amin'ny arabe iray, ny Theatre, ny fasana landy, ny fasana urn, ny fasan'ny lapa, ny fasana korintoana, ny fasana romana, ny làlan'ny tsanganana ,, ny tempoly lehibe, ny fiangonana lehibe ao Petra, ny tempolin'ny liona misy elatra, ny toerana fanaovana sorona, ny fasan'i ny miaramila romana, ny monasiteran ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Ahoana ny fomba hitsidihana an'i Petra, harena any Jordania
Zavatra hita any Munich
Zavatra 9 maimaim-poana hankafizanao any Roma